အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 14 အလှပဆုံးကောလိပ်ကျောင်း
အဆိုပါအလှဆုံးကောလိပ်ကျောင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ, ပေါများအစိမ်းရောင်နေရာများနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးအရာ၌ဝါကြွား။ အဆိုပါအရှေ့ကမ်းရိုးတန်း, လူအများကလေးစားတက္ကသိုလ်များ၎င်း၏အဆင့်မြင့်သိပ်သည်းဆနှင့်အတူပုံမှန်အားအလှပဆုံးကျောင်းခွဲ၏စာရင်းများလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ သို့သော်အလှအပတစ်ခုတည်းကမ်းရိုးတန်းမှကန့်သတ်မထားဘူး, ဒါကြောင့်ကျောင်းတွေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ New Hampshire ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှတက္ကဆက်ဖို့, တိုင်းပြည် span ။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဥယျာဉ်မှမော်ဒန်လက်ရာ မှစ. ဤကောလိပ်ကျောင်းဒီတော့အထူးစေသည်ကိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာပါ။
Berry ဟာကောလိပ်။ RobHainer / Getty Images
Berry ဟာကောလိပ် ရောမမွို့ရှိ, ဂျော်ဂျီယာရုံကျော် 2,000 ကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ်, သေးသောနိုင်ငံအတွင်းအကြီးဆုံးတဆက်တည်းကျောင်းဝင်းရှိပါတယ်။ ကျောင်းရဲ့အ 27,000 ဧကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့် network ကတဆင့်ခံစားနိုင်စီး, ကန်, သစ်တောများနှင့် Meadows ပါဝင်သည်။ သုံးမိုင်ရှည်ကြောကျခငျးဗိုက်ကင်း Trail တောင်တော်ကျောင်းဝင်းဖို့အဓိကကျောင်းဝင်းကိုဆက်သွယ်။ Berry ဟာရဲ့ကျောင်းဝင်းတောင်တက်စီးခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်မြင်းစီးခြင်းကိုခံစားတဲ့သူကျောင်းသားများအတွက်ရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲသည်။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမာရိခန်းမနှင့် Ford ကားလေးအတွက်အသင့်တော်ခန်းမအပါအဝင် 47 အဆောက်အအုံများမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်း၏အခြားဒေသများအနီရောင်အုတ် Jeffersonian ဗိသုကာပါရှိပါတယ်။
Bryn Mawr ကောလိပ်
Bryn Mawr ကောလိပ်။ aimintang / Getty Images
Bryn Mawr ကောလိပ်ဒီ list လုပ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ကောလိပ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bryn Mawr, Pennsylvania ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိပြီး, ကောလိပ်ရဲ့ကျောင်းဝင်း 135 ဧကပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး 40 အဆောက်အဦးများပါဝင်သည်။ အတော်များများကအဆောက်အဦကောလိပ်ခန်းမ, အမျိုးသားသမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာအပါအဝင် Collegiate Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦရဲ့အကြီးမြတ်ခန်းမအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကအဆောက်အဦးများအပြီးငျဆငျခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုသစ်ပင်-စီတန်းကျောင်းဝင်းသတ်မှတ်ထားသောရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်ဖြစ်ပါတယ်။
Dartmouth College က
Dartmouth College ကမှာ Dartmouth ခန်းမ။ kickstand / Getty Images
Dartmouth College က , ရှစ်ဂုဏ်သတင်းများထဲမှ အိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းများ , Hanover, New Hampshire တွင်တည်ရှိသည်။ 1769 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Dartmouth အများအပြားသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများပါရှိပါတယ်။ တောင်မှမကြာသေးမီဆောက်လုပ်ရေးတက္ကသိုလ်နယ်မြေရဲ့ဂျြောဂြီယနျစတိုင်ညီ။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏စိတ်နှလုံးမှာ Baker ဘဲလ်မျှော်စင်မြောက်ဘက်အဆုံးအပေါ်ညားထိုင်လျက်နှင့်အတူပါ Dartmouth အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းအဆိုပါ Connecticut မြစ်၏အစွန်းပေါ်မှာထိုင်လျက်, ချန် Trail ကျောင်းဝင်းမှတဆင့်ပြေး။ ထိုကဲ့သို့သောရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခတည်နေရာနှင့်အတူ, က Dartmouth နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကောလိပ် outing ကလပ်မှအိမ်ပြန်ကြောင်းအဖြစ်နည်းနည်းအံ့အားသင့်လာသင့်ပါတယ်။
Flagler ကောလိပ်၏ပှနျးက de လီယွန်ခန်းမ။ Biederbick & Rumpf / Getty Images
သငျသညျ Gothic အဘိဓါန်ဂျြောဂြီယနျနှင့် Jeffersonian ဗိသုကာနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုကောလိပ်ကျောင်းများများတွေ့ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, Flagler ကောလိပ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်စိန့်သြဂတ်စ, ဖလော်ရီဒါတွင်တည်ရှိပြီး, ကောလိပ်၏အဓိကအဆောက်အဦကိုပှနျးက de လီယွန်ခန်းမဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်နရီ Morrison Flagler နေဖြင့် 1888 ခုနှစ် built, အဆောက်အဦး Tiffany, Maynard နှင့်အက်ဒီဆင်အပါအဝင်နာမည်ကျော်ကိုးရာစုအနုပညာရှင်နှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏လုပျငနျးပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦတိုင်းပြည်အတွင်းစပိန် Renaissance ဗိသုကာများ၏အများဆုံးအထင်ကြီးဥပမာတစ်ခုအမျိုးသားသမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာဖြစ်ပါတယ်။
အခွားသောမှတ်သားလောက်သောအဆောက်အဦကိုမကြာမီကနေအိမ်သို့ခန်းမသို့ကူးပြောင်းနှင့်မကြာသေးမီက $ 5.7 ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခံယူသော Molly Wiley အနုပညာအဆောက်အအုံ, ခဲ့ပြီးသောဖလော်ရီဒါ East Coast မီးရထားအဆောက်အဦး, ပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျောင်းရဲ့ဗိသုကာအယူခံဝင်၏, သင်ကျောင်းဝင်းအကြောင်းကို milling ကျောင်းသားများကိုထက်ပိုပြီးခရီးသွားဧည့်မကြာခဏတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Lewis က & Clark ကကောလိပ်
Lewis က & Clark ကကောလိပ်။ BY-SA 4.0 နောက်ထပ်ယုံကြည်သူ / Wikimedia Commons / CC ကို
ပေမယ့် Lewis က & Clark ကကောလိပ် Portland, အော်ရီဂွန်မြို့ဖြစ်ပါသည်, သဘောသဘာဝချစ်သူများတန်ဖိုးထားဖို့အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းအဆိုပါ Willamette မြစ်ပေါ်တွင် 645 ဧက Tryon Creek အဘိဓါန်ပြည်နယ်သဘာဝဧရိယာနှင့် 146 ဧကမြစ်ကြည့်ရန်သဘာဝဧရိယာအကြားအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 137 ဧကသစ်ပင်ထူထပ်သောကျောင်းဝင်းမြို့အနောက်တောင်ဘက်အစွန်းပေါ်တွင်တောင်ကုန်းများတွင်ထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါကောလိပ်က၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့အဆောက်အဦးများအဖြစ်သမိုင်းဝင်ဖရန့် Manor House ရဲ့ဂုဏ်ယူသည်။
Princeton University ကတိုနီဘလဲခန်းမ။ aimintang / Getty Images
အဆိုပါအိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းများအားလုံးရှစ်အထင်ကြီးကျောင်းခွဲများရှိသည်, ဒါပေမယ့် Princeton University က တခြားသူတွေမဆိုထက်တော်တော်လေးကျောင်းခွဲများပိုမိုအဆင့်ပျေါမှာထငျရှားခဲ့သညျ။ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်တာဝါတိုင်နှင့် Gothic အဘိဓါန်မုတ်၏ပဒေသာ featuring 190 အဆောက်အဦးကျော် Princeton, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, ကျောင်းရဲ့ 500 ဧကအိမ်တော်၌တည်ရှိသည်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းရဲ့ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အဦး, နာဆောခန်းမ, ထိုကဲ့သို့သော Lewis ကစာကြည့်တိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူကို Frank Gehry အဖြစ်ဗိသုကာဟဲဗီးဝိတ်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲခဲ့ကြ 1756. ပိုမကြာသေးမီအဆောက်အအုံများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများနှင့်ဧည့်သည်များပန်းပွင့်ပန်းဥယျာဉ်နှင့်သစ်ပင်-စီတန်းဖို့အတွက် walkway ၏စည်းစိမ်ကိုခံစား။ ကျောင်းဝင်း၏တောင်ပိုင်းအစွန်းမှာရေကန်ဂျီ, အ Princeton သင်္ဘောသားအဖွဲ့ကမှမူလနေရာဖြစ်သည်။
ဆန်တက္ကသိုလ်မှ Lovett ခန်းမ။ Witold Skrypczak / Getty Images
ဟူစတန်၏ skyline ကျောင်းဝင်းထဲကနေအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်သော်လည်း ဆန်တက္ကသိုလ် 's 300 ဧကမြို့ပြမခံစားရဘူး။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းရဲ့ 4,300 သစ်ပင်များကလွယ်ကူကျောင်းသားများကိုလေ့လာတစ်ရိပ်ရတဲ့အစက်အပြောက်ကိုရှာဖွေဘို့ပါစေ။ ပညာရေးဆိုင်ရာအသိအ, ကြီးမားတဲ့စိမျးလနျးဧရိယာသည် Lovett ခန်းမ, အရှေ့ပိုင်းအစွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့အများဆုံးအထင်ကရအဆောက်အဦနဲ့ကျောင်းဝင်း၏စိတ်နှလုံးမှာထိုင်တော်မူ၏။ Fondren စာကြည့်တိုက်အတွက်ကို Quad ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးအပေါ်ရပ်တည်။ ကျောင်းဝင်းအဆောက်အဦးများ၏အများစုမှာဗိုင်ဇန်တိုင်းစတိုင်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှဟူးဗားမျှော်စင်။ jejim / Getty Images
တိုင်းပြည်၏တစ်ခုမှာ အများဆုံးရွေးချယ်တက္ကသိုလ်များ လည်းဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် Palo Alto ၏မြို့အစွန်အပေါ်စတန်းဖို့ဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက် 8000 ကျော်ဧကပေါ်မှာထိုင်။ ဟူးဗားမျှော်စင် 285 ခွကေိုကျောင်းဝင်းအထက်တွင်ရပ်တည်နေနှင့်အခြားအထင်ကရအဆောက်အဦးများသတိရအောက်မေ့ဘုရားကျောင်းနှင့် Frank Lloyd Wright ရဲ့ Hanna-Honeycomb အိမ်ပါဝင်သည်။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏ဗဟိုမှာပင်မကို Quad က၎င်း၏ rounded မုတ်ခြင်းနှင့်အနီ tile ကိုခေါင်မိုးအတူထူးခြားတဲ့ကာလီဖိုးနီးယားမစ်ရှင်ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပေမယ့်တက္ကသိုလ်, အကြမ်းအားဖြင့် 700 အဆောက်အဦးများနှင့်ဗိသုကာစတိုင်များတစ်အကွာအဝေးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။
စတန်းဖို့ဒ်မှာပြင်ပနေရာများအတွက် Rodin ပန်းပုဥယျာဉ်, အရီဇိုးနားရှားစောင်းပင်ဥယျာဉ်နှင့်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်အပါအဝင်အညီအမျှအထင်ကြီးကြသည်။
Swarthmore ကောလိပ်မှာ Parrish ခန်းမ။ aimintang / Getty Images
Swarthmore ကောလိပ် တစေ့စပ်နောက်ပြီးကျောင်းဝင်းပေါ်သို့သွားလာသည့်အခါ 's နီးပါး $2ဘီလီယံပဒေသာပင်များလည်းအလွယ်တကူသိသာသည်။ တစ်ခုလုံးကို 425 ဧကကျောင်းဝင်းလှပတဲ့ Scot ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်, ပွင့်လင်းဂရင်း, wooded တောင်ကုန်းတစ်ချောင်းနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းအများအပြားပါဝင်သည်။ Philadelphia တွင်ရုံ 11 မိုင်ကွာသည်။
Parrish ခန်းမနှင့်ကျောင်းဝင်း၏အခွားအစောပိုင်းအဆောက်အဦးအများအပြားသည်ဒေသခံမီးခိုးရောင် gneiss နှင့် schist ကနေ 19 ရာစု၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင် built ခဲ့ကြသည်။ ရိုးရှင်းများနှင့်ဂန္အချိုးအစားတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်တကွ, ဗိသုကာကျောင်းရဲ့ Quaker အမွေအနှစ်မှမှန်သည်။
quad ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်။ ဘရုစ် Leighty / Getty Images
အဆိုပါ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ် ရေကန်မီချီဂန်အနီးရှိ Hyde Park ကရပ်ကွက်အတွင်းခန့်ရှစ်မိုင်မြို့လယ်ချီကာဂိုကနေထိုင်တော်မူ၏။ အဓိကကျောင်းဝင်းအင်္ဂလိပ် Gothic အဘိဓါန်စတိုင်များ featuring ဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦးများကဝိုင်းခြောက်လအသိအရှိပါတယ်။ ပိုပြီးမကြာသေးမီအဆောက်အဦးများအဖြစ်ထင်ရှားစွာခေတ်သစ်နေစဉ်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်, ကျောင်းရဲ့အစောပိုင်းဗိသုကာများ၏အများကြီးမှုတ်သွင်း။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းဟာ Frank Lloyd Wright Robie အိမ်အပါအဝင်အများအပြားအမျိုးသားသမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာများ, ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 217 ဧကကျောင်းဝင်းသတ်မှတ်ထားသောရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Notre Dame တက္ကသိုလ်မှသညျယရှေုရုပ်ထုနှင့် Golden ခုံး။ Wolterk / Getty Images
အဆိုပါ Notre Dame တက္ကသိုလ်မှ မြောက်ပိုင်း Indiana ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်, တစ်ဦး 1250 ဧကကျောင်းဝင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ပင်မအဆောက်အဦးရဲ့ရွှေခုံးပွဲတစ်ပွဲတိုင်းပြည်အတွက်မည်သည့်ကောလိပ်ကျောင်းကျောင်းဝင်း၏အများဆုံးမှတ်မိဗိသုကာ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့ပန်းခြံကဲ့သို့ကျောင်းဝင်းမြောက်မြားစွာအစိမ်းရောင်နေရာများနှစ်ခုရေကန်များနှင့်နှစ်ဦးကိုသင်္ချိုင်းရှိပါတယ်။
ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင် 180 အဆောက်အဦး၏ပွဲတစ်ပွဲအရှိဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, အမွငျ့မွတျနှလုံး၏ Basilica 44 ကြီးမားသောစွန်းဖန်ပြတင်းပေါက် features, ထိုသို့ Gothic အဘိဓါန်မျှော်စင် 218 ခွကေိုကျောင်းဝင်းအထက်တက်လေ့ပါပဲ။
Richmond တက္ကသိုလ်မှစီးပွားရေး Robin ကျောင်း။ BY-SA 4.0 Talbot0893 / Wikimedia Commons / CC ကို
အဆိုပါ Richmond တက္ကသိုလ် Richmond, ဗာဂျီးနီးယားမြို့စွန်အပေါ်တစ်ဦး 350 ဧကကျောင်းဝင်းယူထားသော။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ရဲ့အဆောက်အဦးများအားဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကျောင်းခွဲတွင်ရေပန်းစားသော Collegiate Gothic အဘိဓါန်စတိုင်အနီရောင်အုတ်ကနေတည်ဆောက်နေကြသည်။ ဆန်တက္ကသိုလ်နှင့် Princeton တက္ကသိုလ်: အစောပိုင်းအဆောက်အဦးအတော်များများဟာလည်းဒီ list အပေါ်နှစ်ခုကတခြားကျောင်းများအတွက်အဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူကို Ralph ဒမ် CRAM ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်ရဲ့ရှိအောင်နှစ်သက်အဆောက်အအုံများလမ်းကြောင်းများနှင့်လှိမ့တောင်ကုန်း crisscrossing ၎င်း၏မြောက်မြားစွာသစ်ပင်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်တစ်ကျောင်းဝင်းပေါ်မှာထိုင်။ ကျောင်းသားစင်တာ-The Tyler ဟေး Westhampton ရေကန်ကျော်တစ်ဦးတံတားအဖြစ် Commons-တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်၎င်း၏ကြမ်းပြင်-to-မျက်နှာကျက်ပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်လှပသောမြင်ကွင်းများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆီယက်တဲလ်အတွက်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုစမ်းရေတွင်း၌။ gregobagel / Getty Images
ဆီယက်တဲလ်တွင်တည်ရှိပြီး, အ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် ပုပေါများချယ်ရီပန်းတွေနွေဦးအတွက်ထွက်ထွက်လာသောအခါယင်း၏အလှဆုံးအချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာရင်းတွင်အပေါ်ကျောင်းများအများအပြားကဲ့သို့ပင်ကျောင်းဝင်းရဲ့အစောပိုင်းအဆောက်အအုံ Collegiate Gothic အဘိဓါန်စတိုင်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အဦးက၎င်း၏ထူးခြားသော Tenino သဲကျောက်နှင့်အတူ၎င်း၏အောက်တိုက်စာဖတ်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ Suzzallo စာကြည့်တိုက်များနှင့် Dennis ခန်းမ, ကျောင်းဝင်းအပေါ်ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အဦး, ပါဝင်သည်။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းရဲ့ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခတည်နေရာတောင်ဘက်အရှေ့, အနောက်မျက်နှာဖို့ကက်စကိတ် Range အိုလံပစ်တောင်တန်း၏အမြင်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်း, Portage နှင့်ပြည်ထောင်စု Bays ။ အဆိုပါ 703 ဧကသစ်ပင်-စီတန်းကျောင်းဝင်းမြောက်မြားစွာအသိအနှင့်လမ်းခရီးပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါဗေဒအယူခံဝင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏ဆင်ခြေဖုံးဆုံးမော်တော်ယာဉ်ရပ်နား relegates တဲ့ဒီဇိုင်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။
အဆိုပါ Wellesley ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေပေါ်တွင်တစ်ဦးကနေသောလူသွားလမ်း။ ယောဟနျသ Burke က / Getty Images
ဘော်စတွန်, မက်ဆာချူးဆက်အနီးတစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝမြို့မှာတည်ရှိပြီး Wellesley ကောလိပ် ၏တစ်ခုဖြစ်သည် ထိပ်တန်းလစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ် နိုင်ငံအတွင်း။ ၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူ, ဒီအမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းရေကန် Waban အပေါ်စီးအဆင်းလှသောကျောင်းဝင်းရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ခန်းမများ၏ Gothic အဘိဓါန်ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ပညာရေးအသိအများထဲမှအဆုံးမှာရပ်များနှင့်နေအိမ်သို့ခန်းမတောအုပ်နှင့် Meadows ကတဆင့်လေသောခရီးများကချိတ်ဆက်ကျောင်းဝင်းအနှံ့ပြွတ်နေကြသည်။
အဆိုပါကျောင်းဝင်းတစ်ဂေါက်ကွင်းမှနေအိမ်တစ်ဦးရေကန်တစ်ကန်, လှိမ့တောင်ကုန်းတစ်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအုတ်, ကျောက်ဗိသုကာတစ်ဦးအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ Paramecium ရေကန်ပေါ်ရေခဲစကိတ်စီးခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ် Lake Waban ကျော်နေဝင်ချိန်ခံစား, Wellesley ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ကြော့ကျောင်းဝင်း၌ကြီးသောမာနထောင်လွှားယူပါ။
အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာကျောင်းများနှင့် Programs ကို
(သင့်မီးဖိုချောင်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ) မိုးလေဝသ front တူအောင်ဖန်တီးလုပ်နည်း
1830 ကနေ 1840 မှ timeline
မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြုလုပ်ခြင်း (ထို့ကြောင့် Sa, ရှီ, စု, Se) そ, せ, す, し, さများအတွက်ပှေ့
ထောပတ်သီးသမိုင်း - ထောပတ်သီးအသီးကိုသီး၏ပြည်တွင်းနှင့် Spread
အဆိုပါဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျော်ကြားနှင့်အစွမ်းထက်အမျိုးသမီးများနေ့ - 2000-2009
ဆောင်းဦးရာသီပေါ်ထင်ဟပ်: အကျဆုံးခြင်းရာသီများအတွက်စာပေ Quotes
ပြင်သစ်Québécois - အကောင်းဆုံးစကားထူး
သင်ဟာဓာတ်ငွေ့ Get ဘယ်မှာဒါဟာအရေးပါသလော
Hypothesis စမ်းသပ်ခြင်း One-နမူနာ t-စမ်းသပ်မှုအသုံးပြုခြင်း